Warbixin: Afar Sababood Oo Santi Solari Uu Kusii Ahaan Karo Tababaraha Real Madrid | Laacib.net
Warbixin: Afar Sababood Oo Santi Solari Uu Kusii Ahaan Karo Tababaraha Real Madrid
10-11-2018 Abdiwahab A. Abeye Comments Off on Warbixin: Afar Sababood Oo Santi Solari Uu Kusii Ahaan Karo Tababaraha Real Madrid
Santi Solari waxa uu sii wadaa natiijooyin wanaagsan oo uu ku kasban karo in si rasmi ah loogu amgacaabo tababaraha Real Madrid oo si ku-meelgaadh ah loogu dhiibay markii shaqada laga caydhiyey Julen Lopetegui, hase yeeshee waqtigiisa ayaa dhamaan kara marka ay Los Blancos booqato Celta Vigo Axadda toddobaadkan, waxaana sida uu dhigayo sharciga ciyaaraha ee Spain, uu macallinku ku-meelgaadh ahaan karaa muddo laba usbuuc ah, taas oo Solari ugu eg kulanka Axadda.
Saddex ciyaarood oo hore oo uu Real Madrid u hoggaamiyey saddex tartan oo kala ah Copa del Rey, LaLiga iyo Champions League, dhamaantood natiijoyin waaweyn oo guulo ah ayuu ka keenay, balse Axadda ayaa uu mar kale isku muujin doonaa sababta uu ugu qalmo in loo magacaabo tababaraha rasmiga ah marka uu Celta Vigo ka hor tago.
Qodobka sharci ee xaddidaya waqtiga uu macallinku si KMG ah u hayn karo xilka, ayaa waxa uu ku qabsanayaa madaxweynaha Real Madrid in laga bilaabo Axadda uu ku dhawaaqo tababaraha rasmiga ah ee kooxda, kaas oo Solari uu sameeyey afar tallaabo oo uu ku kasbaday jamaahiirta iyo ciyaartooyadana, sababna u noqon karaya in xilka loo magaabo.
Afarta sababtood ee Solari uu kusii ahaan karayao tababaraha Real Madrid
1. Saamaynta uu ku leeyahay qolka lebbiska: Tan iyo markii loo magacaabay tababaraha Real Madrid, waxa uu Solari kasbaday amaan isa soo taraysay oo xubnaha qolka lebbiska. Saddexdii ciyaarood ee uu guuleystay mid kasta marka ay dhamaato, waxa laga arkayay 42 jirkan inuu helayo kalsoonida ciyaartooyada magaca ku leh kooxda, kuwa da’da yar iyo kuwa dhawaanta yimid.
Go’aamadii qaatay waxa markiiba ay shaxda koowaad ka tuurtay ciyaartooyo aan loo dhawaan jirin, sida Thibaut Courtois oo uu kulamadiisii oo dhan ciyaarsiiyey, halka uu Navas oo Champions League iska yeeshay kaydka u diray. Waxa kale oo uu shaxdiisa ka tuuray Luka Modric, Isco iyo Asensio ciyaartii Champions League. Karim Benzema iyo Casemiro ayaa ammaan ballaadhan u jeediyey ciyaartii Viktoria Plzen ee Champions League kaddib, taas oo ay ku karbaasheen 5-0.
Go’aamada uu qaatay waxa kale oo uu fursad ku siiyey Vinicius Junior oo dad badan u arkaan inuu yahay xiddiga mustaqbalka Real Madrid, balse muu illoobin Dani Ceballos oo isku muujiyey intii uu Julen Lopetegui joogay.
2. Natiijooyinka kooxda: Melilla, Real Valladolid iyo Plzen, saddexda kooxoodba Real Madrid waxay garaacday iyadoo uu Solari talinayo, mana jirin astaan baqasho iyo inuu difaac ku jiro. Kulankiisa afraad, waxa uu Axadda ka hor tegayaa Celta, natiijada uu ka keenaana waxay noqon doontaa mid qasab kaga dhigta Perez inuu si rasmi ah u magacaabo.
3. Awoodda uu u leeyahay inuu Perez dhinac iskaga leexiyo: Meelaha uu Solari markiiba ku muujiyey inuu yahay tababare wanaagsan oo ay tahay in waqti la siiyo, waxa ka mid ah inuu safkiisa kusoo kordhistay ciyaartooyo da’yar oo lama filaan ah iyo kuwo rukumada aastay oo aan cidina dhinac u riixi jirin oo uu kaydka u diray.
Madaxweynaha Real Madrid, Florentino Perez waxa uu saamayn buuxda ku leeyahay go’aan kasta oo tababareyaasha naadigu qaataan xattaa sida ay u dooranayaan shaxda koowaad iyo ciyaartooyada la fadhiisinayo, laakiin Solari kulamadii uu hoggaamiyey Los Blancos, waxay u muuqdeen kuwo aan sinaba looga talo-gelinin Perez. Caddaynta koowaad, waa in Navas oo loo qoondeeyey kulamada Champions League, kalsooni badanna ka haysta Perez kaydka uu ku dhaxmooday, sidoo kalena iyadoo Isco, Asensio iyo Modric ay fadhiyaan uu soo xushay Vinicius Junior.
4. Da’yarta uu la doonayo inuu kooxda koowaad keeno: Solari aqoon fiican ayuu u leeyahay ciyaartooyada da’da yar ee ku jira kulliyadda Real Madrid, sababtoo ah, waxa uu tababare usoo ahaa dhawrkii sannadood ee u dambeeyey.
Markii ay dhaawacmeen Marcelo, Dani Carvajal, Jesus Vallejo iyo Raphael Varane, si murugo la’aan ah ayaa uu usoo xushay Javi Sanchez oo da’yarta ka mid ah kulankii Copa del Rey, sidoo kalena ciyaartii LaLiga ayaa uu kalsooni siiyey. Waxa kale oo uu niyad-samaan umuujiyey Cristo Gonzales, balse waxa boos koowaad uu siiyey Sergio Reguilon oo difaaca bidix si buuxda uga soo baxay kulamadii uu ciyaaray. Difaaca midig ee Alvaro Odriozola ayaa isaguna kasoo baxay shaqadiisa intii uu maqnaa Dani Carvajal.
Afartan qodob ayaa madaxweyne Florentino Perez ku qabsi karaya inuu tababaraha rasmiga ah Real Madrid.